China America- WERCSmart Service uye Kuyedza | MCM
Chii chinonzi WERCSmart Kunyoresa?
WERCSmart chidimbu cheWorld Environmental Regulatory Compliance Standard.
WERCSmart ikambani yekunyoresa dhatabhesi inogadzirwa nekambani yeUS inonzi The Wercs. Inovavarira kupa inotarisisa chikuva chekuchengetedza zvigadzirwa kune supermarket muUS neCanada, uye kuita kuti zvigadzirwa zvitenge zvive nyore. Mukuita kwekutengesa, kutakura, kuchengetedza nekurasa zvigadzirwa pakati pevatengesi uye vanogashira vanogashira, zvigadzirwa zvinotarisana nematambudziko anowedzera kubva kumubatanidzwa, nyika kana mutemo wepanzvimbo. Kazhinji, iyo Safety Data Sheets (SDSs) inopihwa pamwe chete nezvigadzirwa haifukidze data rakaringana iro ruzivo runoratidza kutevedzera mitemo nemirau. Ipo WERCSmart ichichinja iyo chigadzirwa chigadzirwa kune izvo zvinoenderana nemitemo nemirau.
CScope yezvinyorwa zvekunyoresa
Vatengesi vanoona maratidziro ekunyoresa kune mumwe nemumwe mutengesi. Kutevera zvikamu zvinofanirwa kunyoreswa kuti zviongororwe. Nekudaro, iyo runyorwa pazasi haina kukwana, saka ongororo pane kunyoreswa zvinodiwa nevatengi vako inokurudzirwa.
◆ Zvese Chemical zvine Chigadzirwa
Product OTC Chigadzirwa uye Nutritional Supplements
◆ Zvako Zvekuchengetedza Zvigadzirwa
Products Zvigadzirwa zveBhatiri-Zvinotungamirwa
◆ Zvigadzirwa nema Circuit Boards kana Electronics
◆ Chiedza Mabumba
Oil Kubika Mafuta
◆ Chikafu chinotengeswa neAerosol kana Bhegi-On-Valve
● Rutsigiro rwevashandi vehunyanzvi: MCM yakagadzirirwa timu yehunyanzvi iyo inodzidza mitemo nemirau yeSDS kwenguva refu. Vane ruzivo rwakadzama nezvekushandurwa kwemitemo nemirau uye vakapa mvumo yeSDS sevhisi kwegumi.
● Yakavharwa-loop mhando sevhisi: MCM ine vashandi vehunyanzvi vanotaurirana nevanoongorora kubva kuWERCSmart, vachiona mushe mushe nzira yekunyoresa uye kuongorora. Parizvino, MCM yakapa WERCSmart kunyoresa sevhisi kune vanopfuura mazana maviri vatengi.
Pashure: America, Canada- cTUVus & ETL
Zvadaro: EU- CE
Wercsmart Certification Mutengo
Wercsmart Certification Maitiro
Wercsmart Nguva Yekutungamira
Wercsmart technical Zvinyorwa
Wercsmart technical Inodikanwa